‘एनआरएन ऊर्जामा एफडिआई भित्र्याउने सम्वाहक’ - UrjaKhabar
‘एनआरएन ऊर्जामा एफडिआई भित्र्याउने सम्वाहक’
कार्तिक ०१, २०७६ 1376 लेख
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली (एनअरएन) ले जलविद्युत लगायत अन्य पूर्वाधार विकासमा गरेको लगानी सन्दर्भमा अलिकति विगतको पाटो पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ । सानिमा हाइड्रोको स्थापनासँगै २०५६ सालबाट संस्थागतरूपमा नेपालको जलविद्युतमा एनआरएनको लगानी सुरु भएको हो कुनै अत्युक्ति नहोला । २.६ मेगावाटको सुनकोसी साना जलविद्युत आयोजना यसको विजारोपण थियो । जसको व्यावसायिक विद्युत उत्पादन २०६१ का चैतबाट सुरु भयो ।
सानिमा हाइड्रोका हस्ती द्वय अरुण ओझा, टेकराज निरौला लगायत एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, विनय श्रेष्ठ, खेम लामिछाने, घनश्याम थापा रसियामै पढेर व्यवसाय सुरु गर्नुभएको हो । उहाँहरूकै पहलमा स्वदेशमा केही गरौं भन्ने भावनाको रूपमा जलविद्युतमा लगानी सुरु भयो । विद्युत एन २०४९ यसको लागि प्रेरणाको स्रोत बन्यो ।
यसपछिका वर्षमा केही व्यक्तिगत र संस्थागत गरी नेपालमा एनआरएनको लगानी अनवरतरूपमा आइरहेको छ । आजको मितिसम्म पनि त्यो क्रमले निरन्तरता पाएको छ । अझ बढ्दै र विस्तार हुँदै गएको छ । सुरुमा जलविद्युत, यसपछि बैंकिङ क्षेत्र (सानिमा बैंक) होटल, अस्पताल हुंदै लगानी विस्तार हुने क्रम जारी छ ।
सानिमा समूहले निर्माण गरेका २२ मेगावाटको माई खोला र ७ मेगावाटको माई क्यासकेडमा पनि एनआरएनकै लगानी आयो । बागलुङमा निर्माण भएको २.५ मेगावाटको दरम खोला होस्, सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण भएको १ मेगावाटको हाँडीखोला वा सानिमाले निर्माण गरिरहेको ७३ मेगावाटको मध्यतमोर, २८.१ मे. वा. को तल्लो लिखू, १४.३ मे. वा.को माथिल्लो मैलुङ लगायत दर्जनौं आयोजनामा एनआरएनको संलग्नता छ ।
उता लमजुङमा २७ मेगावाटको दोर्दी खोला एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कम्पनीको अग्रसरतामा निर्माण भइरहेको छ । यसरी एनआरएनले जलविद्युतबाटै सुरु गरेको लगानी यही क्षेत्रमा बढाइरहेका छन् । निवर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टले ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रोको अध्ययन अनुमतिपत्र लिएर अगाडि बढाउने तयारीमा हुनुहुन्छ ।
सानिमा समूहका आयोजना मात्र करिब १ सय ५० मेगावाटका सञ्चालन र निर्माणमा छन् । यिनमा करिब ३० करोड अमेरिकी डलरबराबरको लगानी छ भने स्वपुँजी मात्र करिब ९ करोड डलरबराबर रहेको छ । एवं प्रकारले दोर्दी खोला लगायत समग्रमा अहिलेसम्म जलविद्युतमा एनआरएन लगानी करिब १५ करोड अमेरिकी डलर (स्वपुँजी) बराबर पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
जीवा लामिछाने एनआरएनएको अध्यक्ष हुँदा सय मेगावाटसम्मका आयोजना एनआरएन लगानीबाट सुरु गर्ने भनेर अभियान सुरु गर्नुभयो । यो अभियानको थालनी २७ मेगावाटको दोर्दी खोलाबाट भयो । यसपछि एनआरएनहरू लक्षितरूपमै जलविद्युतमा आउन थालेका छन् । यो राष्ट्रका लागि ठूलो सम्पत्तिमात्र नभएर सम्मान पनि हो ।
विदेशमा आफ्नो अथक, मिहिनेत र व्यापार गरेर कमाएको पैसा नेपालमा भित्र्याएर अझ कुनै एफडिआई (प्रत्यक्ष विदेशी लगानी) जस्तो स्ट्याटसमा नबसी लगानी गरिरहेका छन् । एफडिआई फर्केर विदेशै जान्छ । तर, एनआरएन लगानीको अधिकांश हिस्सा नेपालमै रहन्छ, त्यो कुनै न कुनै पुनर्लगानीका रूपमा । यो निकै सकारात्मक पक्ष हो ।
एनआरएन एउटा यस्तो दपर्ण हो, जसले विश्वमा नेपाल चिनाइरहेका छन् । यहाँ, पर्यटन, होटेल वा जलविद्युतकै क्षेत्रमा विदेशीले लगानी गर्न चाहे तिनै एनआरएनहरू मार्फत आउँछन् । एफडिआईका लागि एनआरएनले दूत वा सेतुका रूपमा काम गर्दै आएका छन् । उनीहरू एउटा दरिलो सम्बन्धका बाहक पनि हुन्, एफडिआइका लागि ।
एनआरएनले लगानी गरेका ठाउँमा विदेशी लगानी भित्रिने विश्वशनियता बढदै जान्छ । यता एनआरएनका लागि पुलको काम फेरि स्वदेशी निजी क्षेत्रले गरिरहेका छन् । स्वदेशीले राम्रोसँग लगानी गरिरहेका छन् वा सुविधा, प्रतिफल वा मुनाफा कमाइरहेका छन् भने एनआरएन आकर्षित भएर आउँछन् । लगानी मात्र मुख्य होइन । पुनर्लगानी महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।
जब देशमा लगानीकर्ताले पुनर्लगानी गर्न थाल्छ तब देशको समृद्धिको यात्रा सुरु हुन्छ । एक पटकको लगानीले मात्र ठूलो तात्विक अन्तर आउँदैन । तर, पहिलो लगानीको कम्तीमा ५०–६० प्रतिशत पुनः त्यही देशमा लगानी गर्दै जानु ज्यादै सकारात्मक पक्ष हो । यसका लागि सम्बाहक भनेको फेरि पनि एनआरएन नै हुन् ।
एनआरएनलाई जसरी नेपालमा अपनत्वको आभास हुन्छ त्यसरी अरूलाई हुँदैन । देशमा बस्ने भन्दा विदेशमा बस्नेले नेपाललाई माया गरेका हुन्छन् । त्यसको महत्त्व अलग हुन्छ । यही कारण पनि एनआरएनले देशमा लगानी भित्र्याइरहेका छन् । ऊ आफूले बोकेर गएको पासपोर्टको पहिचान जोगाउन पनि विदेशमा कमाएर लगानी भित्र्याएका हुन्छ ।
एफडिआई नेपालका लागि चाहिन्छ । तर, उनीहरू आउन पहिला एनआरएनको लगानी आउनुपर्छ । यसले मात्र एफडिआईको ढोका खोल्छ । कतिपय नियम कानुन अनुकूल नहुँदा पनि एनआरएनको लगानी आइरहेको छ । तर, त्यसरी एफडिआई आउन सक्दैन । उसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूण कूरा ‘एक्जिट पोलिसी’ हो ।
विदेशीले जति सजिलोसँग लगानी भित्र्याउँछ त्यसरी नै सहजरुपमा बाहिरिन खोजेको हुन्छ । लगानी फिर्ता लैजाने सजिलो बाटो रोजेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एनआरएनको लगानी ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ । यसैले, उनीहरूको लगानी ल्याउन कागज वा समझदारीमा मात्र होइन व्यवहारिकरूपमै उचित वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।
एनआरएनहरू कुनै न कुनै रूपमा स्वदेशी निजी क्षेत्रसँग मिलेर आउन चाहन्छन् । जति स्वदेशीलाई यहाँको वातावरण थाहा हुन्छ । एनआरएनहरूलाई कमै थाहा हुन्छ । उनीहरू बाहिरै व्यस्त भएकाले उनीहरूको लगानी भित्र्याउन पनि स्वदेशीहरू इमान्दारीपूर्वक लाग्नुपर्यो । संगठितरूपमा एनआरएनको पुँजीको संरक्षण गर्ने किसिमले पनि अगाडि बढ्नुपर्यो । जिम्मेवारी लिनुप¥यो । गरेको लगानी विस्तार गर्न वा पुनर्लगानी गर्न स्वदेशी निजी क्षेत्रले प्रयास गर्नुपर्छ । यसो हुँदा एनआरएनको लगानी आउँछ । उनीहरू भनेका एफडिआई भित्र्याउने पुल वा सम्वाहक हुन् ।
अर्कोतर्फ, सरकारले एनआरएनको महत्त्वलाई बुझ्नुपर्छ । पहिलो कुरा उनीहरूले बिनाझन्झट लगानी गर्न सक्ने हुनुप¥यो । अनुमतिपत्र दिने लगायत काममा सहजीकरण गरिदिने । यसको लागि एकल डेस्क सेवा केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ । उनीहरूले ल्याएको लगानी सहजरूपमा रेकर्ड राखिदिने जबकि बाहिर लैजान परेको अवस्थामा सहज होस् ।
लगानीको सुरक्षा तथा भोलि यहाँबाट अर्को देशमा लगानी गर्छु भन्दा पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । यसो हुना साथ एनआरएनको लगानी आकर्षित हुन्छ । बाहिरबाट आउने व्यक्ति वा लगानीकर्ताले प्रक्रियागत झन्झट मुक्त होस् भन्ने चाहन्छ । उनीहरूसँग युरोप, अमेरिका, अफ्रिका जहाँ पनि लगानीका अवसर हुन्छन् । तर, उनीहरूले बढी प्राथमिकता नेपाललाई दिन्छन् । यसैले सरकारले एनआरएनको ठूलो लगानी ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्यो ।
एनआरएनले रातो कार्पेट ओछ्याउ वा मनग्य नाफा देऊ भन्दैनन् । किनकि यो उनीहरूको घर हो । अनुकूल वातावरण उनीहरूका लागि पहिलो सर्त हो । नेपाल विषम जटिलताबाट गुज्रिँदा पनि एनआरएन लगानी रोकिएको छैन । २०५६ सालमा तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वकालमा पहिलो लगानी भित्रिएको थियो । यहाँ जति दुःख भए पनि उनीहरू आइरहेका छन् । यसको कदर हुनुपर्यो ।
स्वतन्त्ररूपमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी अगाडि बढ्न सक्यो भने आर्थिक समृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्नेछ । ठूला परियोजनामा आवश्यक वैदेशिक लगानी पनि भित्रिन सक्छ । साथै, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न एनआरएनहरूले निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । एनआरएन लगानीको कदर गर्दै अनुकूल वातावरण सिर्जना लगायत पुनर्लगानीका लागि राज्यबाट हुने ठोस पहलले नै उनीहरूप्रति वास्तविक न्याय हुनेछ ।